Umqolomba wenkomo yebhere: "Esona siganeko sihle simbali yakha yaxelelwa" | Uncwadi lwangoku
Inzala yeCave Bear
UJuan Ortiz | | Ababhali, Iincwadi, Inoveli
Inzala yeCave Bear yincwadi yokuqala yombhali odumileyo waseMelika uJean Marie Auel. Ishicilelwe ngo-1980, yincwadi yenoveli, ebekwe kwixesha lePaleolithic kwilizwekazi laseYurophu. Ngalo msebenzi wokuqala i-saga yaqala: Abantwana bomhlaba, ethengise izigidi zeekopi kwihlabathi liphela.
Eli bali libonisa ubuntwana kunye nokufikisa komlinganiswa ophambili kuthotho, uAyla, oye wahlala esemncinci kakhulu inkedama, ngenxa ukuba isizwe sakhe sanikezela Intlekele yendalo. Phakathi kwemigca, kuchazwa ukuba ikhula njani intombazana encinci kwindawo enobutshaba, eyahluke mpela kwindalo awayeyiqhelile. Ngomnyaka we-1986, umdlalo waguqulwa waba ngumfanekiso kaMichael Chapman, kunye noDaryl Hannah.
1 Isishwankathelo seCave Bear Clan (1980)
2 Uhlalutyo lweCave Bear Clan (1980)
2.2.4 Abanye abalinganiswa
2.3 Izimvo ezichanekileyo
3 Izimvo zenoveli
4 Umbhali ngobomi bomntu
4.1 Uhlanga loncwadi
4.2 Iincwadi zikaJean Marie Auel
Isishwankathelo se Inzala yeCave Bear (1980)
ayla uyintombazana ka 5 iminyaka Imvelaphi yeCro-Magnon, ngubani Ukuhambahamba kwilizwe elihlwempuzekileyo ngenxa yenyikima enkulu eyoyikekayo. Ukuhamba kwakhe ekhangela indawo awayehlala kuyo-eyanyamalala kunye nesizwe sakhe-kukhokelela kwindawo engaziwayo neyingozi kakhulu. Ngequbuliso, igqityiwe yi enorme umqolomba wengonyama Oko kumshiya esifa ngenxa yokulimala kakhulu.
Ngakolunye uhlangothi, ukushukuma kwakhona kwabangela nomonakalo a elinye iqela lamadoda akudala, ezentlalo, ababekabani Umqolomba Bear Clan. Kwakufuneka bashiye imiqolomba yabo, besithi babengenwe sisiqalekiso semimoya emdaka. Njengoko babebaleka bayifumana le ntombazana ingxwelerhekileyo, kwaye kwangoko, uIza - umphilisi - uzama ukumsindisa.
Ikhonkco, I-mog-ur (shaman) yendlu, uqaphele ukuba intombazana encinci imakile ulusu lwakho kunye nalo uphawu lwe totem, yeyabo i isimboli yamandla. Wonke umntu uyaqaphela ukuba u-Ayla wahluke njani; bomelele kwaye bomelele, ngelixa yena ebhityile kwaye enobuso obuhle. Oku kubangela ukungaboni ngasonye kwindlu, abasokolayo ekuthatheni isigqibo sokuba baqhubeke nomendo kunye naye, okanye bamshiye kwilishwa.
Ngaphandle kwengxabano, U-Iza uqinisekisa u-Brun, inkokheli yeqela, ukuba ayithathe ahambe nayo le ntombazana, ebhengeza- ngokuyinxenye- ukuba izakuba phantsi kwakhe.. Ukusuka apho, u-Ayla uya kukhulela kwindawo eyahluke mpela kweyakhe, kuba isizwe sakhe sasiyindawo enye yokuzivelela. Eli bhinqa liselula linobukrelekrele obukhulu kunye nobuchule ngezixhobo, ukongeza ekunxibelelaneni ngokukhupha izandi, into ethandwayo phakathi kweNeanderthal.
Ngaphandle kokwaliwa rhoqo yintsapho, UAyla uya kuhlala kukhangelo olungapheliyo lokwamkelwa. Ukunceda ukudityaniswa kwakho, UIza umfundisa ulwazi lwakhe njengomphilisi, ayimilisela ngokukhawuleza, kodwa engenakho ukuyenza kuba engenayo: "inkumbulo yentsapho".
Eli bhinqa lincinci liza kuhamba ngeendlela ezininzi, kodwa liya kuba nakho ukoyisa enkosi komoya wakhe owomeleleyo, njengoko ekhuselwe yingqokelela yengonyama yomqolomba.
Inzala yeBhere ...
Uhlalutyo Inzala yeCave Bear (1980)
Yincwadi Oluhlobo iintsomi zembaliLe yenzeka kwiCrimea Peninsula, ibekwe kwilizwekazi laseYurophu. Iimpawu zencwadi Amaphepha ayi-560, yahlulwe yaba Izahluko ezimfutshane ezingama-28, uxelelwe ngumbali osazi umntu wesithathu. Kuwo onke amabali, Unxibelelwano phakathi kwezizwe ezibini ezingaphambi kwembali luchaziwe "I-Neanderthals kunye neCro-Magnons."
Uyintombazana enenzala yaseCro-Magnon kwaye ndineminyaka eli-5 ubudalaNgubani Nguye kuphela osindileyo kwisizwe sakhe. Unguye owona mlinganiswa, zombini le ncwadi kunye nesaga iphela. Umbhali umchaza njengentombazana ebomvu enamehlo aluhlaza; Iimpawu eziqhelekileyo kumnombo wazo.
Ungumphilisi weClan webhere lomqolomba, Kwaye ngubani okhathalela u-Ayla okoko bamfumana enzakele kakubi. Kancinci, uya kuyithatha iCro-Magnon encinci njengentombi enye, ke uya kuzama ukumnceda ukuze amanye amalungu ohlanga lwakhe amamkele.
Ngu-shaman-okanye u-mog-ur - we-Neanderthal nomads, ngubani naye Ubhuti kaIza. Usisiqhwala. Kunye nodadewabo baya kukhathalela u-Ayla, ke yena unegalelo ekukhuleni komfazi oselula.
Ngaphakathi kwingxelo, abalinganiswa abohluka kakhulu babandakanyiwe, phakathi kwabo ume ngaphandle: Brun (intloko yendlu) kunye noBroud (Unyana kaBrun). Amanye amagama ayabonakala, anje umdiliya, I-WHO intombi uIza kwaye izakuphela ikhula njengodadewabo ka-Ayla. Ibali liya kutyhila amagama abanye abalinganiswa abanjengo: Aba kunye noDurc, abaluleke kakhulu kubomi bomntu ophambili.
Ngaphandle kokuba licebo eliyintsomi, inkunkuma ingena kwiinkcukacha ezinokuthenjwa kwezi zinto zincinci zohlobo Homo, esele zikho ibhalwe ziipaleontologists iminyaka. Yiyo loo nto isicatshulwa thaca izinto ezininzi zembali nezifundisayo kwezi ntlanga zimbini, phakathi kwazo: ubuchule bazo bokuzingela, amasiko abo, kunye nenkcazo eneenkcukacha malunga neempawu zabo zomzimba.
Inzala yeCave Bear inezigidi zabafundi kwihlabathi liphela, kuphela kwiifayile ze- iwebhu ipesenti yayo yokwamkela idlula kwi-90%. Uninzi luthatha njenge: "Eyona saga intle yembali yakha yaxelelwa". Ngokwenxalenye yayo, kwiqonga leAmazon lo mbhalo unenqanaba le-4,5 / 5; apho ngaphezulu kwe-70% inike iinkwenkwezi ezi-5 kwincwadi, kwaye yi-6% kuphela eyixabisileyo nge-3 okanye ngaphantsi.
Umbhali ngobomi bomntu
UJean Marie Untinen wazalelwa eChicago (eIllinois), ngoFebruwari 18, 1936. Uyintombi yesibini yesibini saseMelika esinemvelaphi yaseFinland; Umama wakhe: UMartha Wirtanen; Uyise: UNeil Solomon Untinen, umdwebi wendlu. Ngo-1954, watshata noRay Bernard Auel Kwaye kwiminyaka esixhenxe kamva babesele benamaqela amakhulu osapho kunye namalungu asixhenxe, esi sibini kunye nesabo Oonyana abahlanu.
Ndiyabulela kwi-IQ yakhe ephezulu, wajoyina uMensa, Umbutho wamanye amazwe abanesiphiwo. Emva kokugqiba isikolo esiphakamileyo ebusuku, Wafunda kwiYunivesithi yasePortland State nakwiDyunivesithi yasePortland. Wafumana izidanga ezimbini zehonours kwiKholeji yaseMt. Vernon nakwiDyunivesithi yaseMaine. Xa wayeneminyaka engama-40 wafumana i-MBA kwiYunivesithi yasePortland.
Ekupheleni kweyunivesithi, uJean Marie ndagqiba kwelokuba ndingene kuncwadi, Ukulungiselela le nto, inkqubo yophando kwi-Ice Age yaqala. Emva kwexesha elide lamaxwebhu ebali kwi-prehistory nakwizifundo ezininzi zokusinda, wagqiba kwelokuba enze isaga iphela, endaweni yencwadi enye. Isavenge sokuqala yayi: Inzala yeCave Bear (1980), eyaba yimpumelelo engathethekiyo.
Ukusukela ngoko ukuya phambili, uncwadi lwaseMelika ipapashe ukulandelelana kwesi-5 ukugqibezela uthotho, alubiza ngokuba: Abantwana bomhlaba. Ezi noveli zibekwe kwimbali yaseYurophu, echaza ukuvela kweentlanga ezimbini zamadoda: iiNeanderthal kunye neCro-Magnons, kunye nokuhlangana kwazo. Kuqikelelwa ukuba zingaphezulu kwezigidi ezingama-45 iikopi ezithengisiweyo lonke ihlabathi
Iincwadi zikaJean Marie Auel
yomlando Abantwana bomhlaba
Inzala yeCave Bear (1980)
Intlambo yamahashe (1982)
Abazingeli beMammoth (1985)
Amathafa oThutho (1990)
Iindawo zokufihla ilitye (2002)
Ilizwe lemiqolomba ecwecwe (2011)
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Inzala yeCave Bear
Iziko laseBerna González. Udliwanondlebe nombhali kaEl pozo
Konke oku ndiza kukunika